Finoana :: Vita fanavaozana ny fiangonana Fjkm Analamaozatra Andasibe • AoRaha
Finoana Vita fanavaozana ny fiangonana Fjkm Analamaozatra Andasibe
Fanintelony amin’ireo trano fiangonana nitondran’ny vondrona Filatex tan-tsoroka ny asa fanavaozana tanteraka ny Fjkm Analamaozatra Andasibe. Tamin’ny sabotsy lasa teo no nanatanterahana ny fotoam-pivavahana nitokanana ny fahavitan’ny fotodrafitrasa. Nosoloina biriky sy vato ity trano fivavahana ity, raha tranohazo teo aloha, nanomboka tamin’ny niorenany tamin’ny taona 1956.
Niantohan’ny vondrona Filatex avokoa ny famatsiana ny asa fanavaozana. Mitsangana amin’ny refy, sakany folo metatra sy halavany enimpolo metatra ankehitriny ilay trano fiangonana vita tamin’ny hazo, tamin’ny sakany enina metatra sy halavany sivy metatra teo aloha.
Ny tonian’ny Fjkm ao amin’ny synoda Moramanga Mangoro no nitarika ny lanonam-pitokanana tany an-toerana, izay nifanindran-dalana tamin’ny fandraisan-tanana ny mpitandrina Andriamihaja Rina Andriatsitohaina. Isan’ireo efa nisitraka ny tan-tsoroka tahaka izao ny Fjkm Amboasary Kely sy ny fanitarana ny trano fiangonan’ny Fjkm Ambohitrandriananahary.
Fandraharahana sy varotra sakafo :: Hampivelatra ny sehatra famokarana akoho ny KFC
Fitantanana ny zandarimaria :: « Hoesorina izay tsy maharaka », hoy ny jeneraly Ravalomanana